လယ်ယာမြေနှင့်ပါတ်သက်သော မူဝါဒ နှင့် ဥပဒေများ အပေါ် ဝေဖန်သုံးသပ်အကြံပြု(ပထမ အကြိမ်) ဆွေးနွေးပွဲ – Than Lwin
(၂၄. ၁၀. ၂၀၁၆ )ရက်နေ့ သံလွင် (နိုင်ငံသားစွမ်းရည်မြှင့်)အဖွဲ့ကစီစဉ်သော လက်ရှိ (၂၀၁၆) အမျိုးသားမြေအသုံးချမှု မူဝါဒ၊ (၂၀၁၂) လယ်ယာမြေ ဥပဒေ၊ (၁၈၉၄) မြေသိမ်းဥပဒေတွေကို ဝေဖန်သုံးသပ်၊ အကြံပြု ဆွေးနွေးပွဲကို အလုံလမ်းက My Garden Restaurant မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် အဓိက ဦးဆောင်သူများအဖြစ် ဆရာဦးဇော်မင်း (နတ် မောက်)၊ ဆရာဦးမောင်မောင်ညွန့်၊ ဦးငြိမ်းဇာနည်နိုင်(LCG)တို့က ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပြီး၊ မြေယာအရေးဆောင်ရွက် နေသော နိုင်ငံတကာနှင့်ပြည်တွင်း NGO များ၊ အရပ်ဖက် အဖွဲ့စည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လယ်ယာမြေ ဥပဒေ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေများ၊ တသီးပုဂ္ဂလများတက်ရောက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
လယ်ယာမြေအရေး စိတ်ဝင်စားသူများ စုဝေးပြီးလယ်သမားငယ်များနှင့် ပြည်သူကို အကာကွယ်ပြုနိုင်မည့် မြေယာမူဝါဒ ဥပဒေများဖြစ်ထွန်းရေးကို ရည်ရွယ်၍ လက်ရှိဝေဖန်မှုများထွက်ပေါ်နေသော မြေအသုံးချမှုမူဝါဒနှင့် ဥပဒေများအား ဝေဖန် သုံးသပ်သည့် ပထမဆုံးလှုပ်ရှားမူဖြစ်ပြီး အားရစရာ ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ မြေလွတ်၊ မြေလပ်၊မြေရိုင်းများ စီမံခန့်ခွဲ ရေးဥပဒေနဲ့ လက်ရှိ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပိုင်း အခက်ခဲများအား (၃.၁၁.၂၀၁၆)နေ့တွင် ဒုတိယအကြိမ်အဖြစ် ထပ်မံဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ဆွေးနွေးပွဲတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ မြေယာနှင့် တောင်သူလယ်သမားရေးရာကော်မတီများ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တက်ရောက် ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သော်လည်း အခြားကော်မတီမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးတက်ရောက် ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပါသည်။
Previous Post: လယ်ယာမြေနှင့်ပါတ်သက်သော မူဝါဒ နှင့် ဥပဒေများ အပေါ် ဝေဖန်သုံးသပ်အကြံပြု(ဒုတိယ အကြိမ်) ဆွေးနွေးပွဲ
Next Post: သတင္းစာမ်ားကသမိ္ုင္းကို ေျပာေနၾကသည္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Central Hotel တြင္ေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္
USA WASHINGTON JANET JACKSON VISITS BOYS GIRLS CLUB.But how to relax well in the evening, drinkafew bottles of beer or stronger alcoholic beverages.пёЏDoes Viagra Lower Blood Pressure While we are confident in our formulation, we ve added BioPerine ,anatural compound proven to SIGNIFICANTLY increase the Does Viagra Lower Blood Pressure body s ability to absorb ingredients it is combined with.If you’ve been playing Sims forawhile, you’ve probably thought about startingafull-fledged family and startingafamily.Viagra good or bad for health.